Barcelona Oo Xiddig Kale Siinaysa No.10-kii Uu Lionel Messi Ka Tagay – Banaadirsom | BANAADIRSOM
Home Ciyaaraha Barcelona Oo Xiddig Kale Siinaysa No.10-kii Uu Lionel Messi Ka Tagay –...
Barcelona Oo Xiddig Kale Siinaysa No.10-kii Uu Lionel Messi Ka Tagay – Banaadirsom
Banaadirsom Barcelona ayaa lagu soo waramayaa in ay diyaar u yihiin in ay fursad 3-aad siiyaan xiddiga khadka dhexe ee Philippe Coutinho kaas oo ku dhibaatooday Banaadirsom tan ilaa markii uu ku soo biiray Banaadirsom.
Barcelona ayaa doonaysa in ay iska iibiso xiddiga suuqa xagaagan laakiin waxa ay ku dhibaatoonaysaa in ay dalabyo u hesho xiddiga reer Brazil ee Philippe Coutinho taas oo badalaysa go’aanka Barcelona.
Wargayska MARCA ayaa sheegaya in ay Banaadirsom Barcelona haatan ka fikirayso in ay xiddiga siiso fursad cusub xilli ciyaareedkan si uu u sii joogo Banaadirsom xilli ciyaareedka cusub.
Isla wararka ayaa sheegaya in ay Barcelona ka fikirayso in ay xiddiga Philippe Coutinho siiso Lambarka No.10 oo uu ka tagay Banaadirsom Barcelona kadib markii uu dhacay heshiiskii uu kula jiray Banaadirsom.
Xiddiga khadka dhexe ee Philippe Coutinho ayaa haatan ka soo kabsanaya dhaawac uu muddo dheer ugu maqnaa waxana la doonayaa in uu xiddigu is muujiyo si uu u sii joogo Banaadirsom.
Previous articleMadaxa Maaliyadda FEIT oo war soo saaray iyo dacwad loo gudbiyay Golaha Wadatashiga Qaran
Next articleQorshaha Turkey ee Afghanistan oo isbeddelay